Kumwe Kunze Pakati peSSPAM neCreepy Lies Transparency | Martech Zone
Muvhuro, March 26, 2018 Chipiri, Kurume 27, 2018 Douglas Karr
Mavhiki achangopfuura anga achindivhurira ziso maererano nezvinonyangadza zvemashoko zvakataurwa munhau dzekunze. Ini zvechokwadi ndatorwa kushamiswa nevazhinji vezera rangu muindastiri uye mabvi-avo maitiro uye mhinduro kune iyo Facebook data yaikohwa nekushandisirwa zvinangwa zvematongerwo enyika munguva yazvino mushandirapamwe.
Dzimwe Nhoroondo paMutungamiri Campaigns uye Dhata:
2008 - Ndakave nekukurukurirana kunoshamisa neinjiniya wedhata kubva kumushandirapamwe wekutanga weMutungamiri Obama uyo akagovana nzira yavakakohwa nekutenga data. Chavo chikuru chaive chakaoma, uye veDemocratic Party vaisaburitsa mazita evanopa uye evatsigiri (kudzamara kuhwina kwepuraimari). Mhedzisiro yacho ndeyekuti mushandirapamwe wakakwenya, wakarongeka, uye ukavaka imwe yematura anoshamisa edata munhoroondo. Zvaive zvakanaka zvekuti kunongedza kwakadzika kusvika padanho revavakidzani. Iko kushandiswa kwedata, kusanganisira Facebook, hapana chaipfupika nekupenya - uye yaive kiyi yekuhwina yekutanga.
2012 - Facebook yakashanda yakananga nemushandirapamwe weMutungamiri Obama uye, zvinoita kunge data rakakwenenzverwa kupfuura chero zvaitarisirwa nemunhu kuti aburitse vhoti uye nekubatsira mukukunda Mutungamiriri sarudzo yechipiri.
2018 - Kuburikidza nemuridzo, Cambridge Analytica yakaburitswa kunze sekambani iyo vanoshandisa Facebook kugona kwedata kuti ubate zvinoshamisa mavhoriyamu e data.
Zvino, chokwadi chinofanira kutaurwa, maviri ekutanga macampaign anogona kunge akabatana neFacebook (pakanga paine kupindirana pakati pemushandirapamwe uye Facebook board nhengo). Ini handisi gweta, asi hazvina chokwadi kuti vashandisi veFacebook vakabvumirana here nerudzi urwu rwekushandisa dhata kuburikidza neiyo Facebook mazwi. Mumushandirapamwe weMutungamiri Trump, zviri pachena kuti gomba rakashandiswa, asi kuchine mubvunzo wekuti kana chero mitemo yakaputswa.
Chinokosha kune zvimwe izvi ndechekuti nepo vashandisi vangave vakatora chikamu mumapurogiramu uye vakapa mvumo yekuwana yavo data, iro data reshamwari dzavo online rakakohwewa. Mune zvematongerwo enyika, hazvishamise kuti vanhu vane maonero ezvematongerwo enyika akafanana vanoungana pamwechete pamhepo… saka data iri raive mugodhi wegoridhe.
Ichi hachisi chezvematongerwo enyika - kure nazvo. Zvematongerwo enyika ingori imwe yeaya maindasitiri uko data rakanyanyisa kutsoropodza mumishandirapamwe. Pane zvinangwa zviviri zverudzi urwu rwemushandirapamwe:
Vavhoti vasina hanya - inosimbisa shamwari nevasonganiri kukurudzira vasina hanya nevhoti kuratidzira uye kuvhota ndiyo nzira yekutanga yemisangano iyi.
Vavhoti vasina kusarudza - vasina kuvhota vavhoti vanowanzo zembera kune imwe nzira kana imwe, saka kuwana meseji chaiyo pamberi pavo panguva yakafanira kwakakosha.
Sezvineiwo, ese aya maseti evhoti ari mashoma, mashoma kwazvo muzana. Vazhinji vedu tinoziva nzira yatinozovhotera kure pamberi pesarudzo. Chinokosha kumishandirapamwe iyi kuratidza marudzi emunharaunda pane mukana wekukunda, uye kutevera zvikamu zviviri izvi zvakaoma sezvazvinogona muchiitiko iwe chaunogona kukurudzira uye kufambisa vhoti yavo. Mapato emunyika haatomboratidzira kunzvimbo dzavanovimba kuti vachakunda kana kukundwa… ndidzo nyika dzekutenderera dzavanonanga.
Nesarudzo ichangoburwa iyi ichiparadzanisa, hazvishamise kuti nzira dzave kucherwa nekuongororwa seizvi. Asi ini ndinonyatso kubvunza kutsamwa kweavo vari kurwisa zano uye mea culpas yeavo vakabatwa. Wese munhu anoziva zvematongerwo enyika anonzwisisa kuti data rakakosha sei. Wese munhu aibatanidzwa aiziva zvavaiita.
Iyo Ramangwana reKushambadzira Dhata uye Yakavanzika
Vatengi (uye, mune ino kesi vavhoti) vanoda makambani (kana vezvematongerwo enyika) kuti avanzwisise ivo pachavo. Vanhu vanozvidza huwandu hwakawanda hwe spam uye mabhana emashambadziro. Isu tinovenga iwo asingamiriri ezvematongerwo enyika ezvematongerwo enyika anofashama manheru edu achitungamira kumushandirapamwe.
Izvo vatengi zvavanoda chaizvo kunzwisiswa uye kutaurirana kune zvakananga. Isu tinonyatso kuziva izvi - makwikwi akasarudzika uye account-based yekunangisa mabasa. Ini handina mubvunzo kuti inoshanda mune zvematongerwo enyika, futi. Kana mumwe munhu ane zvakati wandei zvekusendamira-kuruboshwe zvekutenda uye vakasangana neshambadziro inotsigira yavanobvumirana nayo, vanozoifarira voigovana. Saizvozvowo zvichaita kune mumwe munhu akatsamira-kurudyi.
Zvisinei, ikozvino vatengi vari kurwira shure. Ivo vanovenga kushungurudzwa kwekuvimba kwavakapa Facebook (uye mamwe mapuratifomu). Ivo vanozvidza kuunganidzwa kwehunhu hwese hwavanotora online. Saiye mushambadzi, izvi zvinonetsa. Isu tinogadzirisa sei meseji uye kuendesa nenzira kwayo tisingakuzive? Tinoda data rako, tinofanirwa kunzwisisa maitiro ako, uye tinofanirwa kuziva kana uri tarisiro. Iwe unofunga kuti zvinokatyamadza… asi imwe sarudzo ndeye isu kuspammap kunze kwevanhu vese.
Izvi ndizvo zviri kuitika zvine chekuita neGoogle (anoviga iyo data revashandisi vakanyoreswa) uye zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika neFacebook, avo vakatozivisa zvisina kufanira kuti kuwana dhata kuri kuzotadziswa. Dambudziko rinokura zvinopfuura zvematongerwo enyika, hongu. Mazuva ese ini ndinogamuchira mazana ekutaurirana nevanhu vakatenga dhata rangu pasina mvumo yangu - uye ini handina zvachose chandinowana.
Pakati peSpam neCreepy pane Transparency
Mukuona kwangu kwekuzvininipisa, ndinotenda dai ivo vakatanga nyika ino vaiziva kuti data raizove rakakosha, vangadai vakawedzera chinongedzo cheBill of Rights kwataive nedata redu uye chero munhu aida kuzviita aida mvumo yekuratidzira kwete kuikohwa isu tisingazive.
Ngatizvitarisei izvi, mukumanikidza nzira pfupi kuti dzitorere uye titore vatengi (uye vavhoti), tinoziva kuti taive tiri vanotyisa. Kudzokera shure imhosva yedu. Uye mhedzisiro inogona kunzwika kwemakore anouya.
Ini handina chokwadi chekuti kunonoka kugadzirisa dambudziko, zvakadaro. Mhinduro imwe yaizogadzirisa zvese izvi - Pachena. Handitende kuti vatengi vakatsamwa zvechokwadi nekuti ivo data riri kushandiswa… Ini ndinofunga vakatsamwa nekuti vanga vasingatozive kuti raive riri kukohwewa uye kushandiswa. Hapana munhu anofunga kutora bvunzo dzezvematongerwo enyika paFacebook kwaiburitsa dhata ravo kune vechitatu-mapato kuti vatenge uye vakanangiswe kumusangano wezvematongerwo enyika. Dai vakadaro, vangadai vasina kudzvanya zvakanaka paakavabvunza kuti vagovane yavo data.
Ko kana kushambadza kwese kwakapa nzwisiso yekuti sei tiri kuzvitarisa? Ko kana email yega yega ikapa nzwisiso yekuti takaigamuchira sei? Kana isu tikazivisa vatengi kuti nei tiri kutaura navo neshoko chairo panguva yakatarwa, ndine tarisiro yekuti vatengi vazhinji vanozovhurira. Zvichatoda kuti isu tidzidzise tarisiro uye nekuita edu ese maitiro kujeka.
Handina tariro izvo zvichaitika, zvakadaro. Izvo zvinogona kungoendesa kune yakawanda spam, inotyisa ... kusvika iyo indasitiri inogadziriswa. Isu takatombopfuura neizvi zvekare Usanyore uye Usafona zvinyorwa.
Uye zvakakosha kuti uzive kuti pakanga paine kuregererwa kune avo vanodzora kutonga ... vezvematongerwo enyika.
Tags: cambridge analyticsdata yevatengichinotyisaDatadata yesarudzosarudzoFacebookObamaobama sarudzozvakavanzikaspamtarisaPachenakwehwamandasarudzo yehwamanda